Leica Geosystems inosanganisira itsva 3D laser scanning package
Leica BLK360 Scanner Iyo pasuru nyowani ine Leica BLK360 laser image scanner, iyo Leica Cyclone REGISTER 360 desktop software (BLK Edition) uye Leica Cyclone FIELD 360 yematafura nemafoni. Vatengi vanogona kutanga ipapo nekunamatira kubatana uye kufambiswa kwemabasa kubva kune chaicho chinotora zvigadzirwa ...
Vexel inotanga UltraCam Osprey 4.1
UltraCam Osprey 4.1 Vexcel Imaging inozivisa kuvhurwa kwechizvarwa chinotevera UltraCam Osprey 4.1, yakakura kwazvo fomati yakakura yemuchadenga kamera yekuunganidzwa panguva imwe chete kwe photogrammetric giredhi nadir mifananidzo (PAN, RGB neNIR) uye oblique mifananidzo (RGB). Kakawanda kugadziridzwa kune crisp, isina ruzha uye yakanyatso kumiririra dijitari ...
Photogrammetry mifananidzo remote sensors Vexcel
Cadastre, Geospatial - GIS, GPS / Equipment, Engineering, Innovations, dzakawanda
Maguta emuzana ramakore re101: kuvakwa kwezvakawanda XNUMX
Zvivakwa chinodiwa kazhinji nhasi. Isu tinowanzo funga nezvemaguta akachenjera kana edhijitari mune mamiriro emaguta makuru ane vazhinji vagari uye yakawanda zviitiko zvine chekuita nemaguta makuru. Nekudaro, nzvimbo diki dzinodawo zvigadzirwa. Factor mukuti haisi yose miganho yezvematongerwo enyika inoguma pamutsara wenzvimbo, ...
BIM GIS VanaChiremba vezvirwere zvese IA
Maguta edhijitari - maitiro atingaite isu kushandisa matekinoroji senge izvo zvinopihwa neSIMEMENS
Geofumadas bvunzurudzo muSingapore naEric Chong, Mutungamiri uye CEO, Siemens Ltd. Inoita sei kuti Nokia ive nyore kuti nyika ive nemaguta akachenjera? Ndezvipi zvipo zvako zvepamusoro zvinogonesa izvi? Maguta anotarisana nematambudziko nekuda kweshanduko inounzwa nemamegatrends ekushanduka kwemaguta, shanduko yemamiriro ekunze, kudyidzana kwenyika uye huwandu hwevanhu. Mukuoma kwavo kwese, ivo vanogadzira ...
Geo-Injiniya & TwinGeo Magazini - Yechipiri Edition
Isu tanga tichirarama inonakidza nguva yekushandurwa kwedhijitari. Muchirango chega chega, shanduko dzinoenda kupfuura kungoregedza pepa kuita nyore maitiro mukutsvaga kugona uye mhedzisiro iri nani. Chikamu chekuvaka muenzaniso unonakidza, unofambiswa nezvinokurudzirwa munguva yemberi yakadai seInternet ...
Kutsanangurazve iyo Geo-Injini Yekuziva
Isu tinorarama yakakosha nguva mune kusangana kweanodzidzisa ayo kwemakore ave akapatsanurwa. Kuongorora, dhizaini dhizaini, dhizaini dhizaini, kuronga dhizaini, kuronga, kuvaka, kushambadzira. Kupa muenzaniso wezvaiwanzoyerera kuyerera; mitsara yemapurojekiti akareruka, iterative uye yakaoma kudzora zvinoenderana nesaizi yemapurojekiti. Nhasi, zvinoshamisa ...
Isu takaparura Geo-Injiniya - Iyo magazini
Nekugutsikana kukuru tinoshambadza kuvhurwa kweGeo-engineering magazini yenyika yeSpanish. Ichave iine quarterly periodicity, yakapfuma dhijitari vhezheni yemultimedia zvemukati, kurodha pasi mu pdf uye yakadhindwa vhezheni muzviitiko zvikuru zvakafukidzwa nevapikisi vayo. Munyaya huru yenyaya ino, izwi rekuti Geo-engineering rinodudzirwa zvekare, saizvozvo ...
Yakanakisisa yeBIM Summit 2019
Geofumadas vakapinda muchimwe chezvinhu zvakakosha zviitiko zvepasirese zvine chekuita neBIM (Kuvaka Ruzivo Maganement), yaive European BIM Summit 2019, yakaitirwa kuAXA Auditorium muguta reBarcelona-Spain. Ichi chiitiko chakatungamirwa neBIM Chiitiko, uko zvaigoneka kuve nepfungwa yezvichauya kwemazuva ...
Kufambira mberi uye kuiswa kweBIM - Central America kesi
Kuva kune BIMSummit muBarcelona vhiki rapfuura kwave kunakidza. Ona kuti maonero akasiyana sei, kubva kune vanofungidzira kusvika kune vanoona zvakanyanya, vanobvuma kuti isu tiri mune yakasarudzika nguva yechimurenga mumaindasitiri ayo anotangira pakubatwa kweruzivo mumunda kusvika mukubatanidzwa kwemabasa nekufamba kwenguva ...
AEC Inotevera uye SPAR 3D 2019 Conference Program Yakashaniswa
Vatauri vemusangano zana vakaziviswa, kusanganisira mapepa matsva kubva kuNational Geographic neIBM. Kurume 100, 28 (Anaheim, California, USA) - Varongi veiyo AEC Inotevera Tekinoroji Expo + Musangano uye SPAR 2019D Expo & Musangano, iyo yekutanga tekinoroji-yakanangana co-nzvimbo zviitiko zve…
Sei uchifanira kushandisa twin twine pakuvaka
Zvese zvakatikomberedza zviri kuenda kudigital. Yepamberi matekinoroji senge ekunyepedzera njere uye neInternet yezvinhu (IoT) zviri kuramba zvichiva chikamu chakakosha chega chega indasitiri, zvichiita mashandiro nekukurumidza uye nekubudirira zvakanyanya maererano nemutengo, nguva, uye kutsvaga. Enda kudhijitari ...
peji 1 peji 2 peji 3 ... peji 5 peji Next